Inona no maha samy hafa ny laser fibre, laser UV, ny laser marika marika CO2?
avy amin'ny admin tamin'ny 21-08-01
Androany ny milina fanamarihana laser dia malaza be, Ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany, toy ny Components Elektronika, Fitaovana Fitaovana, filàna isan'andro sns. Nefa misy karazana milina fanamarihana laser ary misy bandy vaovao misalasala foana: Iza amin'ireo karazana laser no tokony hofidiko? Wh ...
Ny laser laser dia afaka manamarika amin'ny sehatra artifisialy sy voajanahary maro karazana
Masinina fanamarihana laser CO2 Faritra fanamarihana 200 * 200mm na 300 * 300mm na masinina marika marika laser Co2 misy galvo Co2 milina fanamarihana laser ary milina fanamarihana laser mavitrika Co2. Ny roa amin'izy ireo dia azo raisina ho teknolojia marika marika Co2 roa samy hafa. Ity karazana la ...
Ny tsy fitoviana eo amin'ny masinina fanoratana laser laser sy ny milina fanamarihana laser laser
Mitovy: samy masinina antsika CO2 laser. fampiharana fitaovana: ny milina roa dia azo ampiharina amin'ny fitaovana tsy metaly, toy ny hazo, acrylic, taratasy, volotsangana, vera, hoditra, seramika ary ny sisa. Saingy ny fahasamihafana bebe kokoa: ny tsy fitovizan'ny hazavana farany, ny milina fanoratana laser co2: fitaratra taratra telo, ary solomaso iray ifantohana ...
avy amin'ny admin tamin'ny 21-05-02
Ny mpanamboatra laser amin'ny fibre dia fantatra ihany koa amin'ny masinina fanoratana laser na masinina manamarika amin'ny laser. Azonao atao ny mampiasa ireo fitaovana ireo amin'ny karazana vy rehetra, fa afaka manamboatra marika sy sokitra maharitra amin'ny plastika sasany ihany koa ianao. Na izany aza, ny fampiasana matetika indrindra dia ny stainle vita amin'ny laser haingana ...
Fanamarihana laser UV ho an'ny vahaolana plastika sy fitaratra
Ny milina fanamarihana laser UV dia matetika ampiasaina hanamarihana vera, charger, earphone, TFT, LCD, efijery plasma, lamba, seramika manify, silicon, oscillator kristaly IC, safira. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fanamarihana ireo indostria toy ny, fonosana zava-mahadomelina, kosmetika, polymer toy ny tariby, tavoahangy, boaty misy marika Descrip ...